ထိပ်တန်းမြန်မာစက်ရုံ ဆန္ဒပြမှု အလုပ်သမား ၆ ဦး အလုပ်ထုတ်ခံရ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၄)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းမှာရှိတဲ့ ထိပ်တန်းမြန်မာ အထည်ချုပ်စက်ရုံက အလုပ်သမားတွေ လုပ်ငန်းခွင်မ၀င်တဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလုပ်သမား ၆ ဦးကို မနေ့က အလုပ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့က စက်ရုံထဲမှာရှိတဲ့ အလုပ်သမား ၇၀၀ ထဲက ၃၀၀ကျော်ဟာ နေ့လည်ထမင်းစားပြီးချိန်မှာ လစာတိုးမပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်ထဲ အလုပ်ပြန်မ၀င်ဘဲ ဆန္ဒပြခဲ့တာကြောင့် အဲဒီ အလုပ်သမား ၆ ဦးကို အလုပ်ထုတ်လိုက်တာလို့ အဲဒီအရေးကို ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်အလုပ်သမားထု အခွင့်အရေး ဖော်ဆောင်မှု သမဂ္ဂများကော်မတီ ဥက္ကဌ ကိုမျိုးမင်းသိန်း က ပြောပါတယ်။
အခုလို အလုပ်ထုတ်လိုက်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြို့နယ်အလုပ်သမားရုံးကို တိုင်ကြားသွားမယ်လို့ ကိုမျိုးမင်းသိန်း က ဆိုပါတယ်။ အဲဒီအပြင် လစာကိုလည်း ပေးထားတဲ့ ကတိအတိုင်း တိုးပေးဖို့၊ စက်ရုံမှာရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကို လူမှုဖူလုံရေးကတ် ထုတ်ပေးဖို့၊ စက်ရုံအတွင်းမှာ ဆေးခန်းဖွင့်ပေးဖို့၊ အိမ်သာသန့်ရှင်းရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့၊ သောက်ရေအိုးစင် ထားပေးဖို့၊ ထမင်းစားခုံ အပြည့်အ၀ထားပေးဖို့စတဲ့ အချက်တွေကို တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
The workers really contribute for the developement of the country. Their cry of basic human rights should be granted. They are not amimals. They are human beings. The managing director, please fulfill these basis and essential human needs. What they are asking now is never asked in outside democratic countries. It is always the basic needs of the factory. Be good to the workers, managing director.
Feb 09, 2013 04:25 AM